Daaweynta Proton ee loogu talagalay Kansarka Maskaxda & Lafdhabarta - California Proton
Daaweynta Proton ee Daaweynta Kansarka Maskaxda iyo Lafdhabarta
La dagaallama Kansarka Maskaxda iyo Lafdhabarta sida Laser-u eg
Tiknoolajiyadda California Proton 'tiknoolajiyadda qalin-qorista qalinku waa qaab aad u sax ah oo daaweynta shucaaca kansarka kaas oo u suurtageliya dhakhaatiirtayada inay si xushmad leh u beegsadaan maskaxda iyo burooyinka lafdhabarta leh shucaac sare leh oo ku dhex jira aagaggaas adag, iyadoo laga fogaanayo dhismayaasha muhiimka ah sida maskaxda, maskaxda , qanjirka pituitary iyo neerfayaasha indhaha. Daaweynta loo yaqaan 'Proton beam therapy' waxaa loo isticmaali karaa in lagu guuleysto daaweynta kansarka maskaxda.
Marka la barbar dhigo daaweynta daweynta ee loo yaqaan 'proton therapy care-therapy' ee daaweynta wadnaha, teknoolojiyada baarista qalin-jabinta waxay si sax ah ugu gudbineysaa daaweynta shucaaca maskaxda iyo kansarka laf-dhabarta 2 milimitir iyo daryeelka ugu weyn. Waxaan ku weerari karnaa lakabada lakabka waxaanan yareyn karnaa waxyeelada unugyada iyo xubnaha jirka ee caafimaadka qaba. Tani waxay muhiim u tahay bukaannada maskaxda iyo kansarka laf-dhabarka maxaa yeelay burooyinka dhexe ee neerfaha (CNS) burooyinka ayaa sida caadiga ah ay adagtahay in la daweeyo waxayna ku yaalliin dhismayaasha muhiimka ah ee xasaasiga u ah cabirrada shucaaca. Yaraynta shucaaca unugyadan caafimaad qaba ee ku dhaca burooyinka waxay yareyn kartaa halista aad u geysan karto waxqabadka maskaxdaada, nidaamka dareemayaasha, aragga iyo maqalka. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta waxay sidoo kale kordhineysaa suuragalnimada in bukaanku ku dhammaystiri karaan daaweyn kala go ’yar ama dib u dhac ah.
Kansarka Maskaxda iyo Maskaxda
Cudurka glioma iyo burooyinka hypothalamic
Burooyinka burooyinka ah ee loo yaqaan 'Pituitary' ama buroma adenoma
Burooyinka ku saleysan qalfoofka
Ilaali nidaamkaaga dhexe ee neerfaha, oo ay ku jiraan maskaxdaada, maskaxdaada, qanjirada wadnaha iyo dareemeyaasha saameeya aragtidaada, maqalkaaga iyo xirfadahaaga dhaqdhaqaaqa
Joogto tayada noloshaada inta lagu gudajiro kansarka maskaxda & lafdhabarta daaweynta
Iska yaree waxyeelooyinka kansarka maskaxda & lafdhabarta Daaweynta, oo ay kujirto lallabo, matag iyo daal
Daraasadaha lagu eegayo daaweynta proton ee kansarka CNS waxay muujinayaan in natiijada daaweynta proton ay ka dhalato:
Heerka badbaada ee bukaanka meniniomaska ​​maskaxda ku dhaca1
Hoos u dhigista halista burooyinka la xiriira shucaaca ee sare ee bukaanka beningioma2
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Maskaxda iyo Kansarka Lafdhabarta
Tiknoolajiyadda baarista qalin-jabinta ayaa si sax ah u xakameysa protons-ka si loo dhigo meesha ugu sarreysa Bragg - oo ah meesha ay ku keydiyaan quwaddooda ugu badan - si toos ah lafdhabarta ama burooyinka maskaxda. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan daaweyno qaababka burooyinka ee isku murugsan iyo kala duwanaanta qaddarka burada dhexdeeda.
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u xulasho shucaac sare u qaadaan unugyada burooyinka ee maskaxda iyo lafdhabarta, oo ay u yareeyaan qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah ee ku xeeran Xaaladaha qaarkood, tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daawaynta shucaaca xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu adag.
Shucaaca loo yareeyay unugyada caafimaadka qaba agagaarka burooyinka ee sida joogtada ah ugu baahan qiyaaso badan oo shucaac ah ayaa yareyn kara dhaawaca soo gaara meelaha muhiimka ah iyo qaab dhismeedka maskaxda, maskaxda, qanjirka 'pituitary gland' iyo neerfayaasha saameeya aragtidaada, maqalka iyo xirfadaha dhaqdhaqaaqa. Tani aad ayey muhiim u tahay maadaama waxyeellada dhismayaashaan xasaasiga ah ay wax u dhimi karto tayada noloshaada.
Tiknoolajiyadda baarista ee ku haysa qalin-jabinta ayaa sidoo kale yareynaysa shucaaca dhuuxa lafta, kaas oo yareyn kara daalka la xiriira daweynta.
Si ka duwan tikniyoolajiyadii hore, qorshaha daaweynta maskaxda ama qorshaha daaweynta kansarka ayaa lagu ridi karaa kombiyuutarka oo lagu dhammeyn karaa daqiiqado gudahood. Daaweyntu sidoo kale waa kuwo aan feejigneyn oo sahlan sidaa darteed bukaanku waxay ku laaban karaan howlahooda maalmeed.
Iyada oo ku xidhan marxaladda iyo nooca maskaxda iyo kansarka laf-dhabarta, iskudarka qalliinka qaarkood, kemotherabi iyo shucaac ayaa laga yaabaa in loogu baahdo qaar ka mid ah burooyinka maskaxda iyo lafdhabarta. Fursadaha daaweynta ayaa sidoo kale saameeya da'da, caafimaadka guud iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Daaweynta Kansarka Maskaxda & Lafdhabarta
Natiijooyinka & Saamaynta Muddada-Dheer
Daaweynta daaweynta Proton ee burooyinka maskaxda ama kansarka laf-dhabarka ee Xarunta Daaweynta Kansarka ee Protons ee San Diego ayaa laga yaabaa inay bixiso natiijooyin la mid ah tan shucaaca-raajada caadiga ah, iyadoo la yareynayo mustaqbalka fog iyo waxyeelada nolosha ee halista ah sida xusuusta oo luma, isbeddelka shakhsiyadeed, curyaannimo. , iyo aragga iyo maqal la'aanta oo ay sabab u tahay shucaac ku dhaca maskaxda, laf dhabarta iyo aragtida muhiimka ah iyo qaabdhisyada maqalka. Waxay sidoo kale bixisaa suurtagalnimada yareynta fursadaha cudurka kansarka labaad goor dambe nolosha maxaa yeelay yareynta soo-gaadhista shucaaca ku dhaca unugyada caafimaadka qaba iyo xubnahaaga.
Daraasadaha Cilmi-baarista Taageeraya Daaweynta Proton ee Maskaxda & Kansarka Kansarka
1 Daaweynta shucaaca ee tijaabada shucaaca ee loo yaqaan 'Ston-scanning' ee daaweynta shucaaca ee soo noqnoqda, haraaga ah ama aan la daweynin meningiomas-ka intraranial intraranial meningiomas
2 Khatarta burada labaad ee la filayo iyo qiyaasta qaab dhismeedka dareemayaasha maskaxda ka dib proton iyo ka hortagga shucaaca ee loo yaqaan 'photon radiotherapy' ee loogu talagalay benign meningioma
Daraasad qorshayn isbarbardhig ah oo ku saabsan shucaaca proton radiotherapy ee burooyinka maskaxda ee halista ah
Isbarbardhigga halista kansarka labaad ee radiogenic ka dib marka loo yaqaan 'fotoniospinal irradiation' oo loogu talagalay bukaanka daawada carruurta ee daawada 'medulloblastoma'
Qaabaynta halista burooyinka labaad ee maskaxda gudeheeda iyo qiyaasaha sunta kiliinikada oo leh farsamooyin kala duwan oo daaweyn shucaac ah oo loogu talagalay bukaanada qaba cudurka adenoma
Isbarbar dhigga qorshaynta dawaynta ee loo yaqaan 'Photon' iyo 'proton therapy therapy' ee loogu talagalay 'glioma malite' oo ku saleysan CT, FDG-PET, DTI-MRI iyo fiber tracking
Daaweynta loo yaqaan 'Proton-beam therapy' ee burooyinka CNS
Cudurka shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiosurgery' ee neerfayaasha
Daawada shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiotherapy' ee loogu talagalay burooyinka unugyada dhexe ee habdhiska unugyada naasaha: natiijooyinka caafimaad ee hore
Proton iyo photon radiotherapy ee loogu talagalay burooyinka maskaxda ee carruurta: isbarbar dhig ku saabsan moodooyinka astaamaha qiyaasta iyo xiriirkooda ku aaddan shaqada garashada